Sumcada sawirka: Bruce Silcox, waxaa iska leh Pangea World Theatre
By Soo Baxayaasha DeAnna
Ka dib markii dib loo eegay taariikhdeena qaybta fanka ee ansixisay horumarinta barnaamijka oo lagu daray hawlgelinta joogtada ah ee la -hawlgalayaasha iyo xubnaha bulshada, guddiga McKnight Foundation ayaa ansixiyay cusub yoolka barnaamijka iyo tilmaamaha maalgelinta, oo si rasmi ah magaca ugu beddelay barnaamijka Fanka & Dhaqanka.
Hadafka cusubi waa in waxay kobcisaa hal -abuurka, awoodda, iyo hoggaaminta fannaaniinta shaqeeya ee Minnesota iyo kuwa dhaqanka haya.
Dib -u -cusboonaysiinta barnaamijkan ayaa fursad u siineysa deeq -bixiyayaasha farshaxanka inay si dhow ula jaanqaadaan aasaaska Qaab-dhismeedka Istaraatiijiga ah. Dib -u -cusboonayntani waxay timaaddaa xilli McKnight uu sameeyay ballanqaadyo wax ku ool ah oo ku aaddan horumarinta xallinta cimilada iyo sinnaanta jinsiyadda. Waa hab McKnight uu uga jawaabo waxa ka dhacaya adduunka. Iyada oo la isku soo dhawaanayo Covid-19, xisaabinta isirka, iyo jabka siyaasadeed iyo hanjabaadaha dimuqraadiyadda, waxaan u baahanahay inaan noqon karti iyo waxqabad. Waxaan sii wadnaa inaan isku waafajinno danaha la wadaago dhammaan barnaamijyadeena iyadoo isha lagu hayo saameynta weyn.
“Fanaaniinta iyo dhaqan-dhaqameedka bulshadeena waa aragti-yahanno, iftiimiyayaal, dhisayaasha aadanaha… u dhaqdhaqaaqayaasha, qabanqaabiyeyaasha, iyo isbeddel-sameeyeyaasha.” –DEANNA CUMMINGS, FANKA & AGAASIMAHA BARNAAMIJKA DHAQANKA
Waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso, Maxay tani ka dhigan tahay? Maxaa iska beddelaya barnaamijkan cusboonaysiinta?
Iyada oo la dhisayo tobanaan sano oo bixinta farshaxanka, McKnight wuxuu sii wadi doonaa inuu maalgashado dhaqamada farshaxanka ee gaarka ah oo kala duwan. Waxaan sidoo kale sii wadi doonnaa inaan ku jihayno taageerooyinkeenna ku aaddan dhismayaasha farshaxan -yahannada shaqeeya si ay nolol iyo nolol u helaan, iyo in bulshadeennu ku baraarugto tabarrucyada fannaaniinta.
Isla mar ahaantaana, waxaan aragnaa fursad muhiim ah ballaadhi ballanqaadkayaga fannaaniinta siyaabo cusub. Farshaxaniistayaashu waxay noo sheegayaan in dhismayaasha taageerada ee ay u baahan yihiin si ay u abuuraan ay hormarinayaan. Jawaabta, waxaan ballaarinnay qeexitaankeenna, annaga oo aqoonsannay in fannaaniinta ay u shaqeeyaan siyaabo kala duwan ayna u baahan yihiin taageero kala duwan si ay u guuleystaan. Waxaan si gaar ah ugu darnay dhaqanka xambaarsan sharraxaadda barnaamijkeenna cusub, annagoo qiraya taageeradayada hoggaamiyeyaasha hal -abuurka ah ee ku nool Minnesota oo laga yaabo inaysan dhaqammadoodu adeegsan ereyga fanaan (Dhaladka Maraykanka iyo Hmong waa laba tusaale).
Intaa waxaa dheer, waxaan sii xoojin doonaa taageerada aan u leenahay Madowga, Asaliga, Aasiya, Latinx, iyo fannaaniinta kale iyo hay'adaha dhaqanka ee aan la soo bandhigin, oo ay ku jiraan fannaaniinta iyo dadka dhaqanka ku leh meelaha miyiga ah, Qowmiyadaha Qabiilka, iyo guud ahaan Minnesota -ta Weyn. Waxaan kaloo taageeri doonnaa fannaaniinta shaqeeya iyo kuwa dhaqan -dhaqameedka ah ee hormarinaya caddaaladda.
Astaanta Sawirka: Uche Iroegbu Sawir -qaadis, waxaa iska leh TruArtSpeaks
Maamuusidda Kaalinta Fanaaniinta iyo Dadka Dhaqanka u haya Bulshooyinka
Anigoo ah qof bilaabay inuu ka shaqeeyo McKnight Foundation dhexdeeda aafada dhexdeeda iyo hal toddobaad kadib markii la dilay George Floyd, waxaan dhihi karaa shaqada qoto dheer ee barnaamijkan qaboojinta ayaa aniga iyo asxaabteyda dhex martay culeyska iyo hubanti la’aanta sanadkii la soo dhaafay. Toddobaadyadii ka dambeeyay geeridiisii May 25, 2020, kooxdayadu waxay si ulakac ah ugu dhawaadeen la -hawlgalayaashayada deeq -bixiyeyaasha iyo bulshada. Waxaan daawannay fannaaniin badan oo firfircoon si ay gacan uga geystaan qabashada murugada iyo xanuunka wadajirka. Farshaxannadan, oo horeba xiriir dhow ula lahaa dhagaystayaashooda, waxay ka shaqeeyeen inay abaabulaan, isku xiraan, iyo inay abuuraan meel lagu bogsado.
Tani waxay na tustay mar kale wixii aan hore u ogayn-in fannaaniinta iyo dhaqan-dhaqameedka bulshooyinkeennu ay yihiin aragti-yahanno, iftiimiyayaal, dhisayaasha aadanaha… u dhaqdhaqaaqayaasha, abaabulayaasha, iyo kuwa wax-beddelka sameeya. Waxay abuuraan shaqooyin qurux badan oo naga rari kara maalin walba, haa. Hadana waxay sidoo kale furaan, abuuraan, oo maleeyaan qaabab cusub oo feker iyo ahaansho. Sida Dr. Maria Rosario Jackson ayaa qoray, farshaxan -yahannadu waxay naga caawiyaan dib -u -habaynta arrimaha murugsan iyo furitaanka fursadaha cusub. Waxay naga caawiyaan inaan dib u dhisno oo aan mar kale dhisno. Waxayna naga caawiyaan inaan dib u helno bini -aadamnimadeenna aan wadaagno si aan u bogsano oo aan u hagaajino waxyeelooyinkii hore iyo kuwa socda - si aan u malayno oo aan u abuurno adduun noo wada wanaagsan.
Dhisidda 40 Sano ee Farshaxanka Taageeridda ee Minnesota, Waxaan Fiirineynaa Mustaqbalka
Muddo 40 sano ah, bixinta deeqda farshaxanka ee McKnight waxay maalgelisay fannaaniinta shaqeeya iyo hannaanka hal abuurka muddada-dheer ee Minnesota. Maanta, Barnaamijkeena Farshaxanka & Dhaqanku wuxuu si fiican u taagan yahay inuu sii wado taariikhdaas aqoonsiga iyo maalgelinta fannaaniinta awooddooda, qoto dheerideeda, iyo ballaarinta wax -qabadkoodu ay gacan ka geystaan caddaalad, hal -abuur, iyo Minnesota fara badan.
"Waxaan aragnaa mustaqbal ay ururada dhaqanku noqdaan hanti uu gobolkani ka faa'iidaysan karo, kana faa'iidaysan doono, jiilalka soo socda" –DEANNA CUMMINGS, FANKA & AGAASIMAHA BARNAAMIJKA DHAQANKA
Si aan uga qayb qaadanno istiraatiijiyadan, waxaan isweydiinay: Marka lagu daro wixii aan ku kornay 40kii sano ee barnaamijka Fanka ee McKnight, waa maxay abuurka laga yaabo inaan beerno, kobcinno, oo kori karno shanta sano ee soo socota iyo wixii ka dambeeya?
Sannadkii aan joogay McKnight, waxaan si adag u fiiriyay bixinta deeqda farshaxanka waxaanna arkay waxyar oo bannaan. Tusaale ahaan, 1,300+ ururada farshaxanka ee Minnesota, saddex kaliya oo leh miisaaniyad ka badan $1 milyan ayaa waxaa hoggaamiya dad midabkoodu kala duwan yahay, saddexdaasna mid keliya ayaa iska leh dhismihiisa. Maxay arrintani muhiim u tahay? Sababtoo ah waxay tilmaamaysaa in bulshooyinka midabka leh ee Minnesota, jiil kasta, ay qasab ku noqotay inay dib u soo ceshadaan ururadoodii dhaqanka. Ururada Madow, Asaliga ah, Aasiya, iyo Latinx ee aan taageernay wakhti kasta ma dhaafaan hal jiil oo hogaamiyayaal ah. Waxaan rabnaa inaan taas beddelno.
Waxaan sidoo kale eegnay sida aan ula jaanqaadi karno yoolalka iyo istaraatiijiyadaha barnaamijkeenna bayaankii hawlgalka ee Aasaaska, annaga oo isweydiinayna: Sidee bay bixinteena farshaxannadu gacan uga geysan kartaa caddaaladda iyo xalalka cimilada?
Koox hawleed oo ka tirsan shaqaalahayaga iyo guddiga ayaa su'aalahaan si habsami leh u wajahay, iyagoo samaynaya dib -u -eegis suugaaneed iyo iskaan goob, la -hawlgalidda asxaabteena, iyo la -sheekaysiga wada -hawlgalayaasha deeq -bixiyeyaasha iyo fannaaniinta shaqeeya. Waxaan kala hadalnay qeexitaankooda caddaaladda - siyaabaha ay u abuuraan caddaaladda, siyaabaha ay u raadsadaan caddaalad shaqadooda, iyo siyaabaha ay u arkaan fannaaniin ka baxsan naftooda oo saldhig u ah qaab -dhismeedka caddaaladda. Waxay wadaageen fikrado iyo warcelin noo suurta gelisay inaan runta ku salayno saamaynta iyo mala -awaalka barnaamijkeenna hadda, waxay xaqiijinayaan mabaadii'deenna hagta, waxayna raadsadaan meelaha barnaamijkani ka soo bixi karo.
Iyada oo qayb ka ah ogeysiiskayaga, waxaan bixinnaa tan video dulucda bayaankeena cusub ee yoolka.
Markaan ku noolaanno habka aan u hawlgalino hadafkan iyo istaraatiijiyadan cusub saddexda sano ee soo socota, waxaan ka qayb qaadan doonnaa xubnaha bulshada iyo deeq -bixiyeyaasha. Kani waa geedi socod deg -deg ah oo soo noqnoqda, waxaanan sii wadi doonnaa barashada iyo turxaan bixinta markaan sii soconno.
Rajadaydu waxay tahay in waaxdeena farshaxanka ee hadda jira iyo hab -abuurista deegaanka McKnight ay gacan ka geysatay in la kiciyo dardaaran koraan Markii aan indhaha isku qabto oo aan is weydiiyo sida ay waaxdu u ekaan doonto 40 sano ka dib, waxaan qiyaasayaa horumar, farshaxanka jiilka iyo nashaadyo dhaqameed oo ka dhacaya gobolka oo dhan-oo ka soo jeeda hay'ado farshaxan heer caalami ah oo waara oo ka tarjumaya hodantinimada iyo kala duwanaanshaha gobolka .
At McKnight, waxaan aaminsanahay in fanaaniinta taageersan iyo kuwa dhaqanka qaada ay ka dhigan tahay in la maalgashado dunida mustaqbalka ee aan rabno inaan ku noolaano. Dib -u -cusboonayntani waxay saamayn dhab ah ku yeelan doontaa waaxdeenna, nolosha fannaaniinta shaqeeya, iyo ururrada taageera iyaga. Waxaan nahay annagoo gacmaheena u hananayna ururo badan oo rajaynaya in la dhiso waaxda farshaxanka iyo dhaqanka oo ah mid loo dhan yahay oo xasilloon. Oo waxaan aragnaa mustaqbal ay ururada dhaqanku noqdaan hanti uu gobolkani ka faa’iidaysan karo, kana faa’iidaysan doono, jiilalka soo socda. Waan ku faanayaa waxa kooxda Farshaxanka & Dhaqanka iyo la -hawlgalayaasheenna deeqda ay fuliyeen, weligayna waxaan u heellan yahay shaqadayada aan wadaagno si aan u xoojinno hal -abuurka, awoodda, iyo hoggaaminta fannaaniinta shaqeeya ee Minnesota iyo kuwa dhaqanka haya.